Iifilum zeesalmon ezineesosi ze-béarnaise | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | | Ukupheka kweentlanzi, I-Salsas
Kule mpelaveki silungiselele ukutya ekhaya esithanda kakhulu kodwa esingakuqhelanga ukupheka rhoqo: Iifomthi zeesalmon kunye ne-béarnaise sauce. Iresiphi enesitshixo seBearnaise sauce, isosi emulsified eyenziwe kwibhotolo kunye ne-yolk yeqanda, enongwe ngetarragon kunye ne-shallot glaze.
Le nkcazo ingentla ingakhokelela ekubeni ucinge ukuba isosi enzima, kodwa ayisiyiyo. Ngenxa yencasa yayo, kufanelekile ukukhapha zombini izitya ze iintlanzi njengemifuno idriliwe. Kwi-salmon inika, ewe, ukubamba okukhetheke kakhulu. Ukuba ubeka uhombiso njengathi, inokuba sisidlo esikhulu sepati.
Iisalmon fillets ezinebhereyisi yesosi kunye neebhatata kunye neebhola zeminqathe zenza isidlo esifanelekileyo kumatheko. Ngaba unesibindi sokuzama?
1 isallion, egayiweyo
1 icephe chervil ecoliweyo
Isipuni 1 setarragon ecoliweyo
Iipuniwe ezi-6 zeviniga
Iipuniwe ezi-6 zewayini emhlophe
100 gr. yebhotolo
Esipanini kunye namanzi anetyiwa sibeka pheka iitapile kunye neminqathe, zixotyulwe de ibe yithenda.
Kwangelo xesha silungisa isosi Ukunyamezela. Beka ii-chives ezinqunqiweyo, icephe le-chervil ecoliweyo kunye nenye ye-tarragon ecoliweyo epanini. Songeza iwayini kunye neviniga. Ukufudumeza kunye nokunciphisa ubushushu obuphantsi kude kube sisiqingatha. Wuhlambe umhluzi kwaye uwufudumeze.
Kwisitya, sibeka izikhupha nge whisk. Xa beqala ukuhlangana, yongeza umhluzi wangaphambili kwaye uqhubeke nokubetha ukuze isosi iqine. Xa oku kuqala ukwenzeka songeza ibhotolo enyibilikile kancinci kancinci, ngaphandle kokuyeka ukubetha. Xa isosi inokubunjwa kwemayonnaise, ixesha kunye nendawo yokugcina.
Okwangoku iitapile kunye neminqathe ziya kuphekwa kwaye zibande kancinci. Ngepourer okanye imela ebukhali yenza iibhola Zombini.
Ukugqiba silungisa isinqe Isalmon eyosiweyo okanye ebhakaweyo.
Nje ukuba ugqibile, khonza nesosi efudumeleyo kunye neebhatata kunye neebhola zomnqatha ezimdaka ngebhotolo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » I-Salsas » Iifilimu zeSalmon kunye ne-béarnaise sauce
I-almond kunye ne-coconut pastes
Isaladi yelayisi kunye netyhuna kunye neavokhado